အတိုက်အခံနဲ့ တရားသူကြီးတွေ အဖမ်းခံရပြီးနောက် မော်လ်ဒိုက်မှာ ကသောင်းကနင်း ဖြစ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး အတိုက်အခံနဲ့ တရားသူကြီးတွေ အဖမ်းခံရပြီးနောက် မော်လ်ဒိုက်မှာ ကသောင်းကနင်း ဖြစ်
Maldivian police stand guard onamain street duringaprotest by opposition supporters against the government's delay in releasing their jailed leaders, including former president Mohamed Nasheed, despiteaSupreme Court order, in Male, Maldives, February 5, 2018. Pictures taken February 5, 2018. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES. - RC18B88F67D0
အတိုက်အခံနဲ့ တရားသူကြီးတွေ အဖမ်းခံရပြီးနောက် မော်လ်ဒိုက်မှာ ကသောင်းကနင်း ဖြစ်
မော်လ်ဒိုက် ကျွန်းနိုင်ငံမှာ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်နဲ့ တရားသူကြီး နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးနောက် ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံမှာ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာထားရပါတယ်။
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ရှိတဲ့ မော်လ်ဒိုက်မှာ တရားရုံးချုပ်က ဖမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပေမယ့် သမ္မတက သဘောမတူရာကနေ ကသောင်းကနင်းတွေ စဖြစ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက် အစောပိုင်းမှာ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် မော်မွန်း အဗ္ဗဒူ ဂါယွန်းကို လာဘ်စားမှု၊ အစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာ ဂါယွန်းဟာ လက်ရှိသမ္မတ ယာမင်း အဗ္ဗဒူ ဂါယွန်းနဲ့ ညီအစ်ကို ဝမ်းကွဲဖြစ်ပါတယ်။ မော်မွန်း ဂါယွန်းဟာ ၁၉၇၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၈ အထိ မော်လ်ဒိုက် သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်အောင်၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
အတိုကျအခံနဲ့ တရားသူကွီးတှေ အဖမျးခံရပွီးနောကျ မျောလျဒိုကျမှာ ကသောငျးကနငျး ဖွဈ
မျောလျဒိုကျ ကြှနျးနိုငျငံမှာ အတိုကျအခံ ခေါငျးဆောငျနဲ့ တရားသူကွီး နှဈဦးကို ဖမျးဆီးလိုကျပွီးနောကျ ဆူပူမှုတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ နိုငျငံမှာ အရေးပျေါ အခွအေနေ ကွညောထားရပါတယျ။
အိန်ဒိယ သမုဒ်ဒရာထဲမှာ ရှိတဲ့ မျောလျဒိုကျမှာ တရားရုံးခြုပျက ဖမျးထားတဲ့ နိုငျငံရေးသမားတှကေို လှတျပေးဖို့ ညှနျကွားခဲ့ပမေယျ့ သမ်မတက သဘောမတူရာကနေ ကသောငျးကနငျးတှေ စဖွဈလာတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနေ့ ဖဖေျောဝါရီ ၆ ရကျ အစောပိုငျးမှာ အတိုကျအခံ ခေါငျးဆောငျ မျောမှနျး အဗ်ဗဒူ ဂါယှနျးကို လာဘျစားမှု၊ အစိုးရကို ဖွုတျခဖြို့ ကွိုးပမျးမှုတှနေဲ့ ဖမျးဆီးလိုကျပါတယျ။
မစ်စတာ ဂါယှနျးဟာ လကျရှိသမ်မတ ယာမငျး အဗ်ဗဒူ ဂါယှနျးနဲ့ ညီအဈကို ဝမျးကှဲဖွဈပါတယျ။ မျောမှနျး ဂါယှနျးဟာ ၁၉၇၈ ခုနှဈကနေ ၂၀ဝ၈ အထိ မျောလျဒိုကျ သမ်မတအဖွဈ တာဝနျယူခဲ့ပွီး ခရီးသှားလုပျငနျး တိုးတကျအောငျ၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံဖွဈအောငျ လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။
Previous article မြောက်ကိုရီးယားဆီက လက်နက် ဝယ်ယူမှု မြန်မာကို သြစတြေးလျ ဝေဖန်
Next article ဆလုံတိုင်းရင်းသားတွေ အလုပ်အကိုင်အတွက် လက်မှုပညာ သင်ကြားပေးမယ်